In kabadan 10 qof oo ku geeriyootay qarax ka dhacay Warshad kutaala K/Afrika. – Hiddo Radio 98.5 FM
In kabadan 10 qof oo ku geeriyootay qarax ka dhacay Warshad kutaala K/Afrika.
Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ka dhacay qarax sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac,kaasi oo sida la sheegay ka dhashey dab ka kacay Warshada kutaala Dalkaasi.
Inta la xaqiijiyay ilaa 8 qof ayaa ku geeriyootay tiro kale oo aan la shaacina waa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi,waxaana uu saameeyey howlihii shaqo ee ka socda Warshadda.
Waxaa jira baadi goob ay Shaqaalaha dabdamiska ugu jiraan dad lagu tuhunsan yahay iney gudaha warashadda gubatay ku jireen xilliga uu qaraxa ka dhacayey, warshadda gubatay oo ku taalla duleedka magaalada Capetown ee dalka Koonfur Afrika.
Sida uu warbaahint au sheegay Afhayeen u hadlay shaqaalaha dabdamiska ee Warshadaasi gubatay,dabka ayaa kacay gelinkii dambe ee shalay,waxaana qaraxaasi oo ahaa mid aad u xoogan aan la shaacin ilaa iyo haatan waxyaabaha sababay.
Waxaa lagu magacaabaa Warshadda gubatay Rheinmetall-Denel,taasi oo ay si wada jir ah u lahaayeen Shirkado laga leeyahay wadamada Koonfur Africa iyo Jarmalka.
Wararka ayaa sheega in Warshadda oo ah mid soo saarto hubka, bambooyinka iyo waxyaaba kale, ay isticmaalijireen ciidamada ammaanka Dalka Koonfur Afrika,halka qaarna loo iib geyn jiray daafaha caalamka.
Weli majiro war ka soo baxay hay’adaha ammaanka Dalka Koonfur Afrika ee ku aadan qaraxa warshadaasi ka dhashey,balse waxaa weli soconaya gurmad iyo dabagalo ku saabsan waxa dhaliyay dabkaasi.
Previous Article Dowladda Ingiriiska oo dhaqaale hor leh ku bixineysa la dagaallanka Al-Shabaab
Next Article Ergayga QM ee Liibiya oo sheegay in heshiis laga gaaray dagaaladii ka socday Tripoli.